Wednesday July 08, 2015 - 18:32:14 in Wararka
Kadib markii la iskudayey in lagubo iskuul xannaano ilmaha yaryar oo kuyaallo xaafadda ay Soomaalidu kubadantahay ee Tjärna Ängar, Borlänge ayaa Ururka Umis iyo waalidiin badan oo daggan xaafadda iyo agagaaraheeda ay go'aan ku gaa
Kadib markii la iskudayey in lagubo iskuul xannaano ilmaha yaryar oo kuyaallo xaafadda ay Soomaalidu kubadantahay ee Tjärna Ängar, Borlänge ayaa Ururka Umis iyo waalidiin badan oo daggan xaafadda iyo agagaaraheeda ay go'aan ku gaareen inay sammeeyaan wareeg habeenkii oo dhan ah oo lagu xaqiijinayo amaanka iskuulkaasi.
Laga billaabo saacadda 17.00 ama 5:00-galbanimo illaa waabarigii ayaa bannaanka lajoogaa laguna wareegaa goobaha looga cabsi qabo in waxyeelo loo geysto, waxaana qaswadayasaha ay mar waliba isku dayayaan ineey fursad u helaan ineey qas iyo qal qal galiyaan goobaha iskuulada dadka dhan u dhaxeeya.
Waalidiin badan oo rag iyo dumarba leh iyo dhallinyaro da’ yaryar ayaa isu xilqaammay inay kahortagaan qalalaase dhaco iyo inaan lagubin dhismayaasha waxbarashada iyo waliba guryaha ay dadku kunool yihiin.
Dadka soo jeeda ee xafadda kuwareegayo ayaa ayagoo koox koox usocda dhaxmara xaafadda indho indhayna kusammeeya goobaha loo cabsida qabo.
Nasiib wanaaga wax dhiba lalama kulmin, dadkii qaska wadayna way iska bidhaan qarsoomin oo sida muuqata waxay ubaahanyihiin meel cidla ah oon cidna arkayn si ay wax u kharribaan, laakiin meel labatameeyo qof oo wada shaqaynayso ay goobjoog yihiin way adag tahay cid arbushaad la iman karto.
Tallaabadan ayaa aad loogu riyaaqay dhiirigalinna unoqotay dad badan oo cabsi kaqabay in ladhibaateeyo, xaafaddiina waxay u keetaya xaafad ay dadkeeda maamulaan oon laga aqbalayn qalalaase iyo kahrbudaad midna.
Ka dib markii aan u kuur galnay dhaqdhaqaaqa jaaliyada Soomaalida ku nool magaalada Borlänge ayaa saacad waliba waxaa goobta shaqada ka socota kusoo biiraya dad iskood isu xilqaamay oo doonaya ineey ka qeyb qaateen iyadoo is diiwaan galinta ay socoto ayna doonayan ineey ka qeyb galaan waardiyeynta iyo ilaalinta sharafta iyo sumcada Soomaalida.
Dowlada Sweden ayaa usoo dirtay Booliis iyo waardiyeyaal gooni ah kuwaasoo wada shaqeyn kala dhaxayso Jaaliyada Soomaalida ee iskood isu taagay iyadoo hal meel laga wada duulayo isla markaana isku hadaf la wada yahay.
Dhanka kale Afur guud oo ay isku soo dubbarideen Hawlwadeenada Ururka UMIS ayaa caawa oo Axad ah ka dhacay hool wayn oo ku yaalla Xaafadda Tjärnänga ee magaalada Borlänge(Sweden).